Amaphupho ngamaswidi – iAfrika
Uma uphupha ukuthi udla amaswidi kusho ukuthi uzothola izindaba ezimnandi noma isipho. Uma uphupha unikezwa amaswidi lokho kukhomba inhlanhla. Imvamisa lowo muntu okunikeza uswidi kusuke kungumuntu omaziyo futhi osondelene noma obesondelene nawe uma engasekho emhlabeni. Inhlanhla oyithola kulokho obuvele ukufisa usuke uyinikwa nguyena njengedlozi lakho. Kepha kwesinye isikhathi leyonhlanhla isuke ingabhekene nawe kodwa isuke izoya kwelinye ilunga lomndeni wakho noma omunye wabangane bakho. Izibonelo zohlobo lwezinhlanhla kungaba ukuthola umsebenzi, ukuklonyelwa ngokuthile, noma ukukhushulwa esikhundleni.
4 thoughts on “Amaphupho ngamaswidi”
Sanibonani ngiphuphe ingane yentombazane ingipha i chapisi ebhalwe infinity
Sanibona.ngiphuphe usisi engingamazi Kahle enginika Imali ewu R50 ethi uyangikhokhela Imali Yami maqede wangiqe wangipha chocolate besihlangana endleleni maqede ngadlula komalume kababa kukhona izinja eduze kwamakhekhe mangiwathatha zinompele kimi ngimemeze ugogo aphume azikhuze
.ngabe kusho ukuthi I
Nalu ulwazisinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngemali/